Taliye Ku-xiggeenkii Hore Ee NISA ’’Guddiyada Doorashada Waxaa Ku Jira Shan Ruux Oo Nabad-sugida Katirsan – Great Banaadir
Taliye ku-xiggeenkii hore ee Hay’adda Nabad-sugida Qaranka Ismaaciil Daahir oo warbaahinta wareysi siiyay ayaa ka hadlay doodda ka taagan Guddiyada Doorashada iyo wax ka jira in ay kamid yihii xubno ka tirsan Hay’adda Nabad-sugida Qaranka.
Ismaaciil Daahir ayaa sheegay in guddiyada la magacaabay in ay ku jiraan sida uu hadalka u dhigay shaqsiyaad katirsan Hay’adda Nabad-sugida oo uu si gaar ah u garanayo ’’Ilaa shan qof oo aan Anniga si gaar ah u garanayo ayaa ku jira Guddiyada Heer Federaal iyo kuwa Dowladda Gobolleedyada intaba.
Mar wax laga weydiiyay cadeymaha uu u hayo in ay guddiyada katirsan yihiin shaqsiyaad uu garanayo oo NISA katirsan ayuu yiri ’’Waa leys yaqaannaa shanta ruux ee aan kuu sheegay waliba waa shan ruux oo Saraakiil Nabad-sugida katirsan ah, haddii ay shaqada ka taggeen oo ay hadda dad shacab ah yihiinna dowladda ayaa laga rabaa in ay cadeyntaa la timaado.
Wuxuu sheegay in Ujeedada Guddiyadan Dhalinyarrada u badan loo magacaabay tahay in awood u sheegtaan islamarkaana maquuniyaan sida uu hadalka u dhigay Ergada Beelaha ee Dooranaya Xildhibaan, si markaa shaqsiga ay dowladda wadato loo soo saaro.
Dhinaca kale, mar uu ka hadlayay Hadalkii Ra’iisal Wasaare Ku-xigeenka Xukuumadda Soomaaliya uu shalay ka sheegay Tayaatarka Qaranka, wuxuu sheegay Ismaaciil Daahir in hadalkaasi uu Hordhac u yahay Qorshaha ay Dowladdu Wadato ee ah in doorashada lagu shubto.
‘’Waad ogtihiin Maamul Gobolleedyada uu soo qaatay ee Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Galmudug doorashooyinkii ka dhacay waxey ahaayeen kuwo ay dowladdu maamuleysay xubnihii ay dowladda waatayna ku soo baxeen, marka wixii Uurka Ku Jira Afka Ayaa Dafa, ayey Soomaalidu ku maahmaadaa, sidaa daraadeed Ra’iisal Wasaaraha ayaa cadeeyay sida ay doorahada ka damacsan yihiin’’ayuu hadalkiisa sii raaciyay.
Myanmar protesters killed as coup leader marks Armed Forces Day
Russian and Turkish Presidents to Meet